The Best Hill Station Tour Packages | Dana @ + 91-993.702.7574 kuti uwane mamwe mashoko
Sandra Pebble's Hill Station Tours
Kana iwe uchida kuona chimwe chiso chemaziso, East India Hill Station ndiyo nzvimbo yaunofanira kusarudza. Ikambani inonzi Sand Pebbles inopa Hill station tour packages iyo inoita kuti rwendo rwako ruve rumwe rwezvinhu zvakanakisisa zvaunosangana nazvo iwe uchazomboona. Ndeipi imwe kambani iri nani kunze kweSandra Pebble yekusarudza kubatsira kuronga chikoro chako chechikepe?
North East India Hill Station ine makore manomwe, inozivikanwa seNyika yeVanomwe Sisters. Iwe uchanzwa seAlice muWonderland muNorth East India Hill Station. Inoumbwa nezvose zvisikwa zvaunogona kufungidzira. Kubva kune nzizi dzakasvibirira kusvika kumakomo echando-akavakwa kune matemberi ekare uye nzvimbo dzezvakaitika kare, mvura zhinji, makungwa akajeka uye masango machena, nzvimbo ino inofanira kufa.
Sarudzai hill station tour pakiti yakapiwa neSande Pebbles nekuongorora dzimwe nzvimbo dzakanakisisa North East India Hill Station. Pano pane nzvimbo shomanana dzaunogona kuongorora iwe pachako kana dzakaputirwa mune chikoro chechivara chekufambisa mapurisa:
Shillong. Iyo inozivikanwawo seScotland yeEast. Vatashanyi vanoenda kunzvimbo ino semasvosve kusvika kune shuga munguva yechando. Shillong inonyanyozivikanwa nekuda kwemvura ine mvura inoputika uye makomo matsvuku uye nzvimbo yayo inotonhorera.
Gangtok. Ichi chiteshi chechikomo chakakonzerwa nepamusoro pemakomo. Makomo ose echando akavharwa uye iwe unogona kunakidzwa nemamiriro ezvinhu uye nzvimbo yakabva pahwindo rehotera yako uchifarira mukombe weti inopisa. Iko inonakidza maonero eKanchenjunga achakusiya iwe uchishamisika.
Kurseong. Guta duku duku regomo, riri pedyo neWest Bengal. Zvishoma zvishoma kubva kuMabvazuva. Iyo inonyanya kuzivikanwa nokuda kweiyo mahara eti uye akanaka maoriki orchids ayo akakurira kusango.
Cherapunji. Yakagara muMeghalaya, yakafanana naShillong. Cherapunji inozivikanwa kuva imwe yenzvimbo dzakanyanyisa panyika. Ichi ndicho chikonzero nzvimbo yakanaka kune vanhu vanondivenga kupisa kwekushisa uye vanoda nzvimbo dzakachena. Cherapunji ine mvura inonzi inozivikanwa seNohkalikai inozivikanwa kuti ndiyo yakareba mamvura zhinji muIndia.
Kuchera. Iyi nzvimbo ndeimwe yezvivako zvakakwirira zvikuru mumakomo eSikhkim. Imba yePemayangste, iyo inozivikanwa muEast India, inenge makiromita kubva Pelling. Iwe unogona kukwira nyore nyore ikoko, nguva yose ichi uchifarira nzvimbo ine makomo uye inotonhorera.
Dombo reMatombo rinofukidza zvose zvezvi nzvimbo mune zvizhinji zvavo hill station tour pakiti. Iva nechokwadi chokuti iwe unosarudza zvakanaka!
Odisha Beach Kurwendo neSandara Matamba Anoenda